रामचन्द्र पौडेलका छोराको खण्डन : बुवाले देउवालाई समर्थन गर्नु भएको छैन, भ्रममा नपर्नू - ramechhapkhabar.com
रामचन्द्र पौडेलका छोराको खण्डन : बुवाले देउवालाई समर्थन गर्नु भएको छैन, भ्रममा नपर्नू
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले आफ्ना बुवाले सभापति पदका उम्मेदवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भन्ने कुरा एकदमै झुटो भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) स्रोतले आफ्नै (चिन्तनको) भनाइ भनेर सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
‘मैले बुबाले देउवालाई समर्थन गर्नुभएको छ भनेँ भनेर लेखिएको कुरा भ्रमात्मक हो। यो महाधिवेशनमा बुबा बिलकुलै निष्पक्ष र तटस्थ रहनुभएको छ’, भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान सुरु हुँदै गर्दा सोमबार बिहानै उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले मलाई कोट गरेर भनिएको कुरा गलत हो। यस्ता गलत प्रचार नगर्न अनुरोध गर्दछु।’
यसअघि आजै बिहान बालुवाटार स्रोतले रामचन्द्रका छोरा चिन्तनले नै भनेको भनेर पौडेलले देउवालाई समर्थन गरेको दाबी गरेको थियो। आफ्नो (संस्थापन इतर) समूहले आफूलाई सभापति पदको सर्वसम्मत उम्मेदवार नबनाएपछि पौडेल जारी महाधिवेशनमा कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिई प्रतिस्पर्धाबाटै अलग भएर बसेका छन्।
कांग्रेस महाधिवेशन : मतदान एक घण्टा ढिलो सुरु हुने
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने भनिएको मतदान एक घण्टापछि सुरु हुने भएको छ । बिहान ८ बजे सुरु हुने भनिएको मतदान एक घण्टा ढिलो हुने महाधिवेशन मिडिया सेन्टर संयोजक डा. सुरेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि भने मतदानका लागि लाइन लाग्न थालेका छन् ।
१३ पदाधिकारीसहित १३४ नयाँ कार्यसमिति सदस्य चयनका लागि आज मतदानको कार्यतालिका छ । जसका लागि भृकुटीमण्डप ५१४ र राष्ट्रियसभा गृह र पुलिस क्लबमा ३०० बुथ निर्माण भएको छ ।
सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सदस्यसहित एक सय ३४ पदका लागि भइरहेको निर्वाचनमा चार सय ८६ प्रतिस्पर्धामा छन्। दुई उपसभापतिका लागि सात जना, दुई महामन्त्रीका लागि ६ र आठ सहमहामन्त्रीका लागि १९ नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै, एक सय २१ सदस्यका लागि चार सय ४९ जना चुनावी मैदानमा छन्।
सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । देउवा–कृष्ण सिटौला समूह पहिलो चरणबाटै विजयी हुनेमा आशावादी देखिनु भएको छ भने छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर निर्वाचनमा होमिएका कोइराला, सिंह र निधिले निर्वाचन दोस्रो चरणमा पुर्‍याउने रणनीतिमा जुटेका छन् ।